Zvitsva zvitsva zvine chekuita neApple Watch zvakanyoreswa neApple | Ndinobva mac
Nhasi ranga riri zuva rakabatikana kana zvasvika pazvinhu zvine chekuita neApple Watch uye ndiko kuti, kana muchinyorwa chakapfuura tanga tichitaura nezvemumwe wevakwikwidzi veApple Watch yadonha, Microsoft Band 3, mune izvi isu tiri kuenda kunotaura nezve maviri matsva patent iyo Apple yakanyoresa kuitiswa mune ramangwana Apple Watch.
Apo Apple inonyora mazano matsva tinofanirwa kuiongorora zvakanyatsonaka uye ndeyekuti makore mashoma apfuura, kumashure mu2014 ndakanyora chinyorwa umo ini ndakataura nezve patent yevamwe vanofungidzirwa vasina waya EarPods nemamwe mabasa ayo makore matatu gare gare Isu takavaona vachishandiswa zvakakwana mumaAirPod matsva ayo anozotengeswa mumasvondo anopfuura maviri chete.
Nhasi patents yakanyoreswa neApple muUnited States Patent uye Trademark Hofisi ivo vanoenda pane izvo zvataigona kuona zvichishandiswa mune ramangwana Apple Watch mhando. Kunyanya, maviri mapatendi akaiswa, imwe ine chekuita nemasaini ayo anogona kuitwa neApple Watch kudzora zvimwe zvigadzirwa zveApple uye imwe yacho nepfungwa yekugona kuratidza mushandisi kwete nepassword asi nemoyo wavo uye izvo Zvinoenderana neavo veCupertino, munhu wega wega ane mutinhimira wakasiyana.
In the next link iwe unogona kuona mune zvakadzama zvese zvakapihwa neApple mune izvi Uye iwe unogona kuona kuti mafambiro mazhinji anotsanangurwa zvakadzama kuti izvozvi kana tikazviita neazvino Apple Watch ivo havaite chero chakanaka. Iyo chechipiri patent taura nezve simbisa mushandisi kuburikidza nekupomba Uye ndezvekuti kana iwe wakashandisa Apple Watch iwe unenge waona kuti yakanyatsojeka mune izvi zviyero, vashandisi vasiri ivo vega vanozvitaura, vari avo veCupertino vanotsigirwa navanachiremba vazhinji vakaiyedza.
Kana iri yechipiri patent, dai taigona kuchiona yakaburitswa parizvino Apple Watches munguva pfupi Uye ndezvekuti kuvhiya uku kunongoenderana nehurongwa hutsva hweWATOS kuitira kuti ishandise ma sensors kuziva kuti kana munhu anoitakura muridzi wayo kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvitsva zvitsva zvine chekuita neApple Watch zvakanyoreswa neApple